Bilaogera Shiliana Mandeha Bisikileta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2017 4:52 GMT
(Marihina fa tamin'ny 27 Oktobra 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Iray amin'ireo tanàndehibe maloto indrindra eto amin'izao tontolo izao (izay tsy hireharehanay loatra) i Santiago, renivohitr'i Shily. Nisy ny vondron'ireo mpankafy bisikileta, nanomana fomba iray mba hampiroboroboana ny fandehanana bisikileta ao an-tanàndehibe tao anatin'ity toe-javatra ity.
Teraka tamin'ny taona 2001 manana tanjona hampiroboroboana ny fandehanana am-bisikileta milamina ao an-tanàndehibe ny “Arriba de la Chanca” (ES) ( adika hoe “eo ambony kisoa.” Any Shily antsoina hoe “kisoa” ny bisikileta). Miara-miasa amin'ny CONASET (ES), Komitim-pirenena ho an'ny fifamoivoizana milamina ihany koa izy ireo, amin'ny fampiofanana any amin'ny oniversite ary miasa amin'ny lalànan'ny fifamoivoizana. Mandritra ny taona dia mikarakara hetsika fandehanana am-bisikileta izy ireo, ary hisy izany amin'ny voalohan'ny volana Novambra. Natao tao anatin'ny fihetsiketsehana hafa, antsoina hoe “Ciclistas furiosos” (ES) (mpitaingina bisikileta miriotra mafy) ihany koa ny hetsika toy izany. Azonao atao ny mijery ny lalan'ny bisikileta ao amin'ny Google Earth sy mamaky ny vazivazy momba ny fandehanana am-bisikileta ihany koa. Miara-miasa ny ekipa roa amin'ny hetsika sasany.
Nizara ny olany ny mpitaingina bisikileta hafa , toy ny jiro sy ny bisikileta, anisan'izany i Claudio (ES) izay nanazava hoe:
“Manazava antsika ny jiro rehefa ao anatin'ny haizina na tsy misy hazavana. Nandritra ny dianay alina na tao anaty tonelina, dia namela ny fiara hafa hahafantarana ny fisiantsika eny an-dalana sy ny diantsika ny jiro. “
Namoaka ny olana momba ny fandehanana am-bisikileta nanomboka tamin'ny taona 2003 i Bicivilizate (ES). Miainga avy amin'ny lamaody ka hatrany amin'ny lalàna federaly, azo jerena avokoa ny vaovao momba ny fandehanana am-bisikileta. Ahitana ny rakitsoratra feno momba ny fandehanana bisikileta Shiliana izany.
Namoaka sary momba ny “Andro Iraisam-pirenena Tsy Misy Fiara” i Pablo Abarca tao Talca, tanàndehibe ivelan'ny renivohitra izay nahitana olona an-jatony nandeha bisikileta ho fomba iray hampiroboroboana ny tsy fandotoan-drivotra.